Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Thailand Izindaba Ezintsha » Kusuka eSuper Fun Hot Hot to Security Walls and Patrols
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ubugebengu • Industry Hospitality Industry • Izindaba • I-Thailand Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
Umgwaqo ohamba ngezinyawo ePattaya - isithombe ngezilokotho ezinhle zePattaya Mail
Isimo esesabekayo futhi esingenalutho emgwaqweni odume kakhulu wasePattaya siphazanyiswa kuphela yizingxenye ezintathu zezitolo ezingakavulwa: isitolo esisodwa se-Family Mart kanye nekhemisi elincane okubonakala sengathi libhekelela abantu abambalwa abasendaweni, nesitolo sezingubo saseJapan silindile ngesineke ukuze izikhathi ezinhle zigingqike.
Ngenyanga edlule, iklabhu yasebusuku yaseNashaa yahlaselwa ngumlilo futhi manje isicashile ngothango oluphakeme kakhulu lwezinsimbi.
Ngenxa yezizathu zokuphepha, ezinye izakhiwo eziningi kule ndawo zimbozwe ngothayela ofanayo ku-Walking Street odumile.
Onogada sebephindeke kathathu kusukela kwenzeke lesi sigameko yize engekho amakhasimende kulezi zinsuku.
The isisulu somlilo ngenyanga edlule, Iklabhu yasebusuku yeNashaa ePattaya, Thailand, manje isivikelwe ngocingo oluphakeme kakhulu olunomnyango omncane weteeny. Ushintsho olukhulu lwe-Walking Street selusukile endaweni emnandi kakhulu lwaya edolobheni lesipoki, nezinye izakhiwo eziningi zimbozwe ngothayela ofanayo ngezizathu zokuphepha.
Endaweni eyikhilomitha elilodwa, isibalo sonogada abaqashwe ngasese siphindwe kathathu. Owayekade eyi-bar uzinciphisile izindleko zokuvikela ngokusebenzisa inja eboshwe ngamaketanga kunalokho engeza izinsongo zayo zokukhonkotha esazisweni sezilimi ezimbili esiyalela abadlulayo ukuthi bangangeni ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Lapho ingabesongeli abantu, inja ihlehla kumata othi “Siyakwamukela.”
Ngokuzithoba kwePattaya Mail
Unogada oseduze uMnu uKatee uthe, “Umlilo waseNashaa wenze wonke umuntu wethukile. Noma engekho amakhasimende kulezi zinsuku, isekhona imali eningi eboshiwe kulezi zakhiwo ezindala. ” Ucabanga ukuthi abanikazi nabaqashi balinde ukukhokhelwa ukulungiselela ukubhidlizwa ngokuphelele.
Akuwona wonke umuntu ovumayo. Amanye amaqhawe ekhibhodi yasendaweni acabanga ukuthi kumane nje kuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuba ibhizinisi livame ukubuyisa ubhadane lwezikhathi nezikhathi ezimnandi ziphinde ziqale phansi. Kufanele bathathe uhambo lapho ngaphambi kokuzethemba kakhulu. ICity Hall, ngokwengxenye yayo, izisekela impela izinguquko ezinkulu ezizayo. Azikho izimvume zokuqhuba amabhizinisi ahlobene notshwala azokhishwa ngo-2022, kuyilapho izakhiwo ezingasohlangothini lolwandle ezingena emanzini zihlelelwe ukudilizwa. Inkampani kagesi yesifundazwe isebenza kanzima ingcwaba amakhebuli angaphezulu ku-Walking Street, kepha umqondo ojwayelekile ukulungiselela indawo yokuzilibazisa nendawo yebhizinisi kunokuba isiphephelo sabadansi be-chrome pole.
I-Eastern Economic Corridor, okuyinhlangano ecebile yezinkampani ezinkulu zaseThai nezangaphandle, iyona nto enqumayo. I-EEC isivele ixhase amaphrojekthi amaningi endawo - izixhumanisi zemigwaqo, ukulungiswa kwetheku laseBali Hai, ukulungiswa kwebhishi laseJomtien nasePattaya, kanye nojantshi wejubane oxhumanisa le ndawo neBangkok - futhi bambalwa abangabazayo ukuthi izohamba kungekudala ku-Walking Street. Lapho ogandaganda ekugcineni bengena, kuzovela umgwaqo ohluke kakhulu emlotheni.
Kunoma ikuphi, izicingo zensimbi ezivalekile kanye nocingo oluhlabayo oluqinisiwe ngeke luphuthelwe yinoma ngubani. Okuwukuphela kwezivakashi eziklabhini manje amaloli okulahla udoti.